Musa Ukubheja Konke Ngecebo Lokwemvelo | Martech Zone
Ngibe nengxoxo enhle nelinye lamakhasimende ethu ngempelasonto ohlale engena futhi abuze impendulo maqondana nesayithi, analytics, kanye neminye imibuzo ephathelene necebo lokukhangisa elingenayo. Ngiyalithanda iqiniso lokuthi bathembisene, amakhasimende ethu amaningi awa… kepha kwesinye isikhathi umzamo odingekayo ekuphenduleni nasekuchazeni izizathu esizenzayo ususa umsebenzi uqobo.
Ukuphawula okukodwa kwaba ukuthi izindleko zabo kuphela is isu lokukhula kwemvelo elilandelwa ku-inthanethi. Yize ngithanda iqiniso lokuthi yithi esiphethe lokho, kuyangethusa ukungazi ukuthi leli yilo lodwa isu elitshaliwe. Ngivame ukutshela abantu ukuthi ukwakha ubukhona be-inthanethi kufana nokwakha isitolo, indawo yokudlela noma ihhovisi. Isitolo kufanele sitholakale maphakathi (usesho nezenhlalo), kufanele sihehe izivakashi ezifanele (ukwakheka nokuthumela imiyalezo) futhi kufanele siguqule amathemba abe ngamakhasimende (izingcingo ezenzweni nasemakhasini okufika).
Kepha uma wakhe isitolo esihle, usithole kahle, futhi ungaguqula izivakashi zakho zibe ngamakhasimende… umsebenzi awuphelile:
Usadinga ukukhuthala khangisa isitolo sakho. Anginandaba nokuthi ungubani, kubalulekile ukuthi uphume lapho ucindezele inyama, wakhe okulandelayo, futhi ubandakanye abanye emphakathini. Isitolo esihle endaweni enhle enabantu abakhulu nemikhiqizo sisadinga ukukhuthazwa ngezikhathi ezithile. Njengomnikazi webhizinisi, awukwazi ukuhlala phansi ulinde ukufika kwebhizinisi, kufanele uyolibheka ngenkathi usalinde isu lakho lokumaketha online ukuthuthuka.
Amasu we-Organic afana izwi lomlomo lingakhulisa ibhizinisi lakho, kepha hhayi ngejubane olidinga ngalo! I-WOM isu elihle futhi livame ukuhola imikhondo esezingeni eliphakeme kakhulu. Kepha lokho kuhola kuthatha isikhathi - ngakho-ke kungadingeka unikeze izikhuthazo ezengeziwe zokushayela ithrafikhi ngokushesha okukhulu. Noma ungahle udinge ukuthenga ithrafikhi ngokukhokha ngokuchofoza ngakunye, uxhaso kanye nezikhangiso ze-banner. Kuyabiza, kepha kungakulethela ithrafikhi eningi ngokushesha okukhulu.
Ukukhula kwemvelo kuthatha isikhathi. Isu elihle lokumaketha online lakha ukuhlobana kanye negunya kancane ngasikhathi. Njengoba ukhokha izikweletu zokumaketha, ukuthambekela okuya phezulu akuhlali kududuza njalo uma kunezikweletu eziningi ezizayo kunenzuzo… phuma. Amabhizinisi amaningi atshala imali ku-inthanethi futhi alindele ukuthi bazoba nalo lonke ibhizinisi abalidingayo ezinsukwini ezingama-2 kuya kwezingama-5 ezizayo. Imvamisa akunjalo.
Musa ukugembula yonke into ekukhuleni kwemvelo. Noma… uma wenza njalo, qiniseka ukushiya isikhathi nezinsiza ukusiza ukukhuthaza nokukhipha igama kucebo lakho lokumaketha online. Awukwazi ukumane ulahle inqwaba yemali kwiwebhusayithi enhle nokuqukethwe okuhle futhi ulindele imiphumela emihle - kuningi okufanele ukwenze. Isifiso sami kuphela ngaleli klayenti ukuthi bafaka umzamo omkhulu emsebenzini abangawulawula kunokuba basuse ukunaka kwethu. Basiphathise isu labo… futhi eduze kweklayenti, akekho noyedwa ofuna ukuthi liphumelele ukwedlula thina!
Tags: isu elingaxhunyiwe ku-inthanethiisu lokukhangisa onlineisu online
Ngo-Apr 25, i-2012 ku-9: 55 AM
Uhlelo lokumaketha kufanele luhlanganiswe kahle. Isu lokukhula ngokwemvelo ku-inthanethi libalulekile, kepha lizosebenza kangcono esikhathini eside lapho lihambisana neminye imizamo yokukhangisa. Awusoze wafuna ukubeka wonke amaqanda akho kubhasikidi owodwa ngoba abathengi bangaxhumana nomkhiqizo wakho ezindaweni eziningi zokuthinta ezahlukahlukene.